Xubnaha ka tirsan la-takoorayaasha Gobolka KGS - Minority Rights Group
Xubnaha ka tirsan la-takoorayaasha Gobolka KGS
Minority Rights Group > Xubnaha ka tirsan la-takoorayaasha Gobolka KGS
Si dhameystiran oo run ah uga jawaab su’aalaha.
Hubin aad u hufan ayaa lagu sameyn doonaa dadka laga soo xushtay codsadayaasha.
Qofka lagu helo inuu si barer ah oo khayaano ah uga jawaabay su’aalaha si uu u marin habaabiyo guddiga xulashada, fursadan kaliya looma diidayee waxaa usii dheeraaneysa in liiska madow (Black-list) laga gelin doono codsiyada uu u sameysan doono fursad kastoo ka jirta Safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho (shaqo-qoris; codsiyo kale) mustaqbalka.
Foomkan online ayad ku buuxin kartaa, waadna safe-gareysan kartaa si aad hadhow ugu soo noqotid oo aad u dhammeystiratid intii kuu harsaneyd. Anagana saas ayannn jeclaan laheyn inaad ku buuxiso. Haddi internet-kaaga uusan taas kuu saamaxeynin, waa degsan kartaa waxaadna ku soo diri kartaa email kan: somalia[at]minorityrights.org.
Waxaad u baahnaan doontaa inaad ku soo lifaaqdo dhowr dikumeenti oo marqaati kacaya codsigaaga; marka fadlan waqti fiican qaado oo aad ku soo ururisato waraaqahaas oo dhan oo aadna ku soo lifaaqdo. Haddii aad dhib kugu noqoto foomka buuxintiisa ama aadan heysanin caddeymaha lagaa codsaday, fadlan Email noogu soo dir inta: somalia[at]minorityrights.org.
Foomamka la buuxiyey iyo lifaaqyadooda waa lagu soo diraa ugu dambeyn xx.xx.2021.
Qeybta A – Macluumaad adiga kugu saabsan
Lab dheddig waa ka aamusay
Meessha aa deggan tahay:
Luqadehee si fiican aad u taqaanaa qoraal, akhris, ku hadal, oo aad xafiis uga shaqeyn kartaa.
Fadlan qeex haddii ay wax kale jiraan
Qeybta B – Xirii la lahaansho KGS
Maku nooshahay Gobalka Koonfur Galbeed Soomaaliya?
Haddii “haa” ay tahay, muddo intee leg ayaad ku nooshahay KGS?
In ka badan 5 sano In ka yar 5 sano
Haddii aadan hadda ku nooleyn KGS ama aadan ku nooleyn 5 sano u dambeysay, fadlan u qeex si buuxda xiriirka aad la leedahay KGS:
Section C – Ma ka midtahayqoomiyadaha la takooro
Ma ka mid tahay qoomiyadaha la takooro?
Haddii haa ay tahay, fadlan si buuxda u sharax.
Qeybta D - shahaaddo ama khibrad
Ma heysataa shahaaddo jaamacadeed?
Haddii haa ay tahay; fadlan sheeg jaamacadda iyo maaddadaad soo baratay iyo dhibcaha aad keentay.
Dhibcaha lagu siiyey:
Maaddada/qeybta aad baratay:
Haddi maya ay tahay, waxbarasho jaamacadeed oo 2 sano ah ma dhameysay?
Haddii aadan heysanin waxbarasho jaamacadeed oo 2 sano ka yar, weli waa ka qeyb gei kartaa barnaamij kan, hase yeeshee waa inaa caddeysaa inaad leedahay waayo aragnimo/xirfad shaqo oo 4 sano ama ka badan.
Fadlan sharax xirfaddaada shaqo iyo sababta ay awoodsiineyso xirfadaha loogu guuleysan karo in door laga cayaaro ka qeybgalka maamulka dawladda:
Qeybta E – ku-firfircoonaanta bulshada
Waa maxay waayo aragnimada aad u leedahay xagga firfircoonida bulshada dhanka taageeridda beelaha laga tirade badan yahay ama la heyb-sooco oo la takooro? Fdlan si buuxda u qeex, waxwy noqon kartaa door shaqaalenimo lacag lagu qaato ama iskaaga ah oo lacag la’aan ah, ama door siyaasadeed ama door akademiyadeed ama bulshadeed.
Qeybta F – Adeegga bulshada
Sidee uga qybqaadanjirtay adeegga bulshada? Haddi aadan horey ugu jirin ama aadan xiiseeneyn inaad kordhiso ka qeyb qaashadada, maxaad u xiiseyneysa inaad barnaamijkaan ka mid noqoto?
Fadlan sheeg magacyada 2 qof oo si fiican ku yaqaan, darajadooda iyo cinwaanadooda. Mid ka mis ah waa ugu yaraan inuu yahay qof la xishmeeyo kana tirsan dadka laga tirade badan yahay lana heeb-sooco, kaasoo xaqiijin kara inaad ka mid tahay bulshadooda ama in:
Loo aqoonsan yahay hoggaamiye bulshadiisa ka tirsan AMA
Jago rasmi ah inuu haayo sida Xildhibaan Federaalka ama KGS oo matala bulshadaas AMA
Inuu leeyahay raad muuqda oo xoogleh xagga taageeridda bulshadaa (sida agaasime fulintaa NGO dadka laga tira badan yahay, ama wariye la yaqaan oo bulshadaasi ka tirsan).
Marqaatiga labaad waa inuu awoodi karo inuu caddeyn karo firfircoonidaada aad ku matasho bulshadaas iyo inaad fulineyso ballantaada dhanka adeegga bulshada.
Bulshaduu ka tirsan yahay:
Darajada bulshada ku leeyahay/ ku leedahay:
Aqoontiisa adeeggaga bulshada ama firfircoonidaada arrimaha beesha:
Labada marqaati waa inay oggolaadeen in xubnaha kooxdeena ay la xiriiri karaan arrimo la xiriiro xaqiijionta awgee. Haddii aan awoodi weyno inaan la xiriirno marqaatiyaashaas, codsigaada waa la joojinayaa.
Lifaaqyada lagaa rabo
Caddeyn taariikhda dhalashada (sida warqadda dhalashada amaaqoonsiga, baasaboor, inaad dugsi hoose ka dhigatay):
Caddeyn inaad deggen tahay KGS (magaalada: ------------------------; Gobolka: ------------------------) AMA xiriirkaad la leedahay KGS (sida: warqadda dhalashada, dugigaad dhigatay, ama meeshaad ka shaqeysay):
Caddeyn shahaaddo jaamacadeed AMA caddeyn 2 sano inaad jaamacad dhigatay AMA caddeyn waao-aragnimo xirfadeed u dhiganta shahaaddo jaamacadeed qeybta munaasib ku ah ama ku habooncodsiga:
CV-gaada oo dhameystiran:
Sidoo kale ku soo lifaaq dikumeenti kasto oo la xiriiro adeeggaaga bulshada, firfircoonidaada xagga bulshada ama dikumenti kale oo saacidaaya qiimeynta codsigaada:
Haddi aadan soo bandhigi Karin qaar ka mid ah caddeymaha kor ku xusam ama dhammaantood, halkan sanduuqa dhexdiisa ku sharax sababta. Waxaa laga yaabaa inaan kuula soo xiriirno oo kaagala tashano arrintaas ama aan xogtaada tixgelino markaan qiimeyneyno codsigaada:
Ma awoodo inaan keeno caddeymaha soo socda: